Mpandresy ianao – Blaogin'i Voniary
Matetika isika malagasy dia zatra ny manatsatso sy manakiana. Manimba zavatra maro anefa izany, satria ny teny sy ny fihetsika atao amin’ny olona iray dia miantefa any amin’ny sainy ary misy fiantraikany amin’ny fianany. Raha lazainao fa “dondrom-belona”, “vendrana”, “tsy misy ilana azy” foana ny zanakao, ny vadinao na ny manodidina anao dia ireo teny ireo no tanteraka aminy. Ny tena ratsy indrindra aza moa dia ianao mihitsy no manambany tena indraindray: “izao badolahy izao ihany e!”, “izao sisa e!” na “afaka ho aiza moa!” Anisan’ny sakana tsy mampandroso ireo toe-tsaina lomorina ireo ka mila fongorana. Ilaina ny manana hambom-po, vonona hiatrika sy hitraka mandrakariva. Izay TOE-TSAIN’NY MPANDRESY izay no tokony hananao. Ireto ary misy TARIGETRA FITO azonao entina miaina izany.
1.Noharian’Andriamanitra mitovy endrika aminy ianao: tsara ianao
Raha mino ianao fa tsara Andriamanitra dia inoy koa fa TSARA IANAO, satria nataony mitovy endrika aminy ny olombelona. Izay milaza ny mifanohitra amin’izany aminao dia mpandainga sy te-hanakivy anao fotsiny.
2. Aza afangaro ny fanetren-tena sy ny fanambanian-tena
Ny fanambanian-tena dia fanaratsiana ny maha-anao anao. Ny fanetren-tena kosa dia fahaizana mipetraka amin’izay toerana tokony hisy anao. Izany hoe fahaizana MANAJA NY HAFA (ray aman-dreny, namana, mpiara-miasa sy ny sisa) ary MANDRAY NY ANDRAIKITRA mifanaraka amin’ny tena.
3. Fantaro izay tsara ao aminao
Nomen’Izy Mpahary TALENTA avokoa ny olombelona rehetra. Tsy diso anjara amin’izany FANOMEZAM-PAHASOAVANA izany ianao. Aza variana mitsiriritra ny hafa fa fantaro ny soa ao aminao dia trandraho izany.
4. Manàna tanjona
Ny mahatonga ny olona mifanenjika mazana dia ny tsy fananany tanjona mazava. Fantaro izay TIANAO HATONGAVANA AMIN’NY FIAINANA (harena, asa, fiainam-pitiavana…). Raha hitanao izany dia tsy ho sasa-poana hanindry olona ianao ary tsy hampiontsona anao izay fanatsatsoana ataon’ny sasany.
5. Mijoroa sy mitrakà raha sendra olana
Ny olana sy ny sakana dia tsy maintsy misy raha mbola eto an-tany. Tsy natao ahakivy ireny fa hanamafy ny sainao sy hanefy anao. Ny LESOKA LESONA ka izay hitanao fa tsy nety dia areno. Aza sasatra ny manantena sy mitozo hatrany ny lalanao.
6. Tairo hatrany ny hambom-ponao
Manatona izay olona afaka MANOHANA anao amin’ny tanjonao ary MAMPAHERY anao raha sendra lavo. Mihainoa HIRA MANENTANA. Mamakia BOKY TSARA mampita fahendrena sy manaitra hambom-po. Manàna TENY MANENTANA avy amin’ny mpandinika, olon-kendry, fahendrena Malagasy na mpihira, fa indrindra teny AVY AMINAO MANOKANA.
7. Itaro miandalana ny tontolonao
Rehefa hainao ny mitia ny tenanao dia zarao amin’ny AKAIKY ANAO indrindra izany fitiavana izany (vady, zanaka, ankohonana). Avy eo, velaro ho an’ny FIARAHAMONINA, ny FOKO misy anao ary ny FIRENENAO ilay fikasanao hanasoa.
Mazotoa àry mitrandraka ny TSARA aminao, amin’ny ny zava-miseho ary amin’ny fiainanao manontolo ry havako. Aza misalasala koa mizara ny soa azonao amin’ny hafa fa izany no TOE-TSAIN’NY MPANDRESY.